onlineakhabar.com: यो फिल्म हेर्ने क्रममा आखिर किन मरे दर्शक?.... (भिडियो सहित)
Amazing News, Amazing Video, Entertainment, Main News, Movies, Video, Viral Video » यो फिल्म हेर्ने क्रममा आखिर किन मरे दर्शक?.... (भिडियो सहित)
यो फिल्म हेर्ने क्रममा आखिर किन मरे दर्शक?.... (भिडियो सहित)
मानिसहरु फिल्म मनोरञ्जनका लागि हेर्ने गर्दछन् । फिल्म बारे हरेक मानिसहरुको रोजाइ फरक फरक हुन सक्छ । कसैलाई कमेडी फिल्म मन पर्न सक्छ भने कसैलाई एक्सन त कसैलाई भूतको मन पर्न सक्छ । यस्तो हुँदा हुँदै पनि केही मानिसहरु फिल्म हेर्दा हेर्दै मृत्यु भएका छन् ।
हालै रिलीज भएको हरर मुभी कन्ज्यूरिङ-२ (हरर मुभी) हेर्ने क्रममा भारत चेन्नाईमा एक व्यक्तिको मृत्यू भएको छ । ६८ बर्षीय जी.राम मोहन फिल्ममा भएको अन्तिम सिन हेर्दा उनको टाउको देखिएको थियो । तर पुलिस भने मृत्युको कारण खोजीरहेको छ । हरर फिल्मको केही दृश्य हेर्दा उनि डराएका थिए ।
फिल्म हेर्दाहेर्दै मृत्यु भएको घटना पहिलो होइन । कुन फिल्म हेर्दा मानिसहरुको मृत्यु भएको थियो र किन यस्तो भयो ? हेर्नुहोस् भिडियो
Tags : Amazing News Amazing Video Entertainment Main News Movies Video Viral Video